News Collection: अवको विकल्प डिभोर्स नै हो
अवको विकल्प डिभोर्स नै हो
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नायिका झरना थापा चर्चामा रहेकी छिन् । उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र सफल पनि रहेका छन् । निर्माता तथा नायिकाको रुपमा परिचय वनाउन सफल नायिका थापाले अभिनय गरेका सिनेमाको संख्या ५ दर्जन भन्दा माथी पुगेको छ । तर, पनि उनको विश्रामबारे कुनै चर्चा छैन । हाल चलचित्र ‘फेसवुक’को निर्माण गरेर प्रदर्शनको चटारोमा रहेकी थापासँग अनलाइनखवरका लागि विजय आवाजले गरेको कुराकानीः
सरल मानिस हुँ । तर, सजिलो भने छैन् ।
निर्मात्री वन्न गाह्रो की नायिका वन्न ?
निर्मात्री वन्न धेरै गाह्रो छ । किनभने, निर्मात्री भैसकेपछि सवै कुराको जिम्मेवारी हुन्छ । दौडधुप धेरै गर्नुपर्छ, तनाव पनि उस्तै हुन्छ ।
टपलेस पनि हुनुभएछ, यस्ता हर्कत नगरि चल्दैन भन्ने लागेर हो ?
यो विल्कुलै होईन । किनभने, म यसको विरोधी पनि हुँ । तर, चलचित्र ‘ओम’मा कथाले नै मागेपछि यस्तो सिन दिएको हो । तर, यसमा म पुरै टपलेस भने भएकी छैन । यसभन्दा अघि पनि मैले चलचित्र गोर्खालीमा मिनीस्कर्ट लगाएको थिएँ, जुन दर्शकले रुचाउनु भएको थियो । यसैले, टपलेस भएको भन्नु भन्दा पनि कथाले मागेपछि मात्र खेलेको भन्नु उपयुक्त होला ।
पहिले यस्ता प्रस्ताव आएका थिएनन् ?
कहिले पनि आएनन्, यसैले त्यस्ता सिन दिने अबसरै जुरेन ।
कहीलेसम्म सिनेमा खेल्ने र वनाउने ?
फेसवुक रिलिज भएपछि यसको निर्णय पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गर्छु ।
उमेर ढल्कदै गएपछि नै चर्चामा आउनु भयो नि हैन ?
मैले अभिनय गरेका अधिकांश गीतहरु चर्चामा रहेका छन् र सिनेमाले पनि उत्कृष्ट व्यापार गरेका छन् । जतिवेला म छोरी पाएर ३ महिनाको सुत्केरी थिएँ, त्यतिवेला नै मैले खेलेको गीत चर्चित वनेको थियो । म दावी गर्न सक्छु, मैले जस्तो भुमिकामा अहिलेसम्म कुनै नायिकाले पनि अभिनय गरेका छैनन् । यसैले, म उमेर ढल्कदै गएपछि हिट भए भन्ने कुरा मान्दिन ।
तपाईको घरझगडा पनि चर्चामा आउँछ नि हैन ?
के गर्ने जीवन भनेको सुख दुखको संगम रहेछ । यसैले पनि यस्ता कुराहरु जीवनमा हुँदा रहेछन् ।
सहकर्मीकै कारण घरझगडा पर्दा कस्तो महसुस भयो ?
निकै फिल्ममा उ ( रेजिना उप्रेती ) सँग काम गरेकी छु, विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सँगै गईएको पनि छ । तर, उसले यस्तो गर्छे भनेर सोंचेको पनि थिईन् । उसले २-३ पटक नै यस्तो गरि । मैले उसलाई मेरो श्रीमान्सँग पहिलोपटक सँगै देखेपछि चेतावनी दिएको थिएँ । तर, उसले यो कुरा मानिन । पछि, त आफ्नै घर अगाडि सँगै भेटें ।
फेरि पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्छ र ?
अव त म सहन सक्दिन । अव पनि सुनिलजी वाट यस्तो क्रियाकलाप भयो भने डिभोर्स नै उत्तम उपाय हो ।
श्रीमानसँगको सम्वन्ध कस्तो रहेको छ अहिले ?
अहिले त राम्रो छ । कतिपय कुरामा सम्झौता गर्नुपर्दोरहेछ ।
चाँडै विहे गरेछु जस्तो लाग्दैन ?
एकदमै लाग्छ । कहिलेकाहीं अरुका साना-साना वच्चा देख्दा आफ्नो छोरीलाई धेरै माया गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ । युवायुवती डेटिङ गएको देख्दा आफुले त्यो कुराको अनुभव नै गर्न पाईएन भन्ने पनि लाग्छ । तर, पनि म सुखी छु, आफ्नो जीवनदेखि ।
पहिलो प्रेम याद आउँछ ?
फस्ट लभ नै सुनिलजी सँग भयो । म तिमी विना वाँच्न सक्दिन, आई लभ यु त कसैले पनि भनेनन् मैले पनि भनिन् । २०५२ सालको वैशाखमा सुनिलजी सँगै नै पहिलो प्रेम भयो र उहासँगै विहे भयो ।
पहिलो चुम्वनको संझना ?
सवै कुरा उहाँसँग भयो । विहेअघि चुम्वन र अंगालो त मारियो । तर, यो भन्दा माथी त विहेपछि नै भयो । यति भनेपछि आफै वुझ्नु न -..हा.हा.हा.)
घरमा मिठो पकाउने खानेकुरा ?
म मासु एकदमै मिठो पकाउँछु । तर, मैले पकाएको खाना पनि सवैले मिठो नै भन्छन् ।
गाडि त महङ्गो चढ्नुहुन्छ, आफ्नै कमाईले किन्नु भएको हो ?
मैले किन्दा ५० लाख थियो । मेरो कमाई र सुनिलजी ले पनि दिनुभएको छ ।
आफ्नो प्रतिस्पर्धी नायिका को हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो प्रतिस्पर्धा म आफैसँग छ । तर, तपाईहरु नै छुट्टाउनुहोस् को छ भनेर ।
नेपाली सिनेमाको सेक्सी हिरो ?
सवैजना राम्रा नै छन् । तर, राजवल्लभ कोईराला सेक्सी लाग्छ । उसको आँखा राम्रो लाग्छ ।
अव कस्तो भुमिका गर्ने रुचि छ ?
रोनाधोना छोडेर युनिक पाराको भुमिका गर्न चाहन्छु ।
अचेल नेपाली नायिकाहरु गर्वका साथ आफुले सेक्स गरेको उमेर खुलाईरहेका छन् यसवारेमा तपाईको धारणा के छ ?
यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यस्तो कुराहरु गोप्य राख्नु नै राम्रो हो ।
अहिले नेपाली सिनेमाको ट्रेन परिवर्तन भएको छ भन्छन् नि तपाईलाई लाग्छ ?
यो एकदमै गलत कुरा हो । यसले नेपाली सिनेमा विगार्छ । चपली हाईट चल्दैमा यसो भन्न मिल्दैन ।
अन्त्यमा, विहान उठ्दा दाह्री र जुगा आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
म दौरासुरुवाल लगाएर क्याटवाक गर्दै सडकमा निस्कन्थे । अनि, मिडीयालाई वोलाएर फोटो खिच्थें ।